Kukura Nyaya Mobile Wallets pashure Demonetization
The demonetisation pamusoro ₹ 500 uye ₹ 1,000 Banknotes aiva nzira mvumo nehurumende India pamusoro 8 Mbudzi 2016, zvokurega Utilisation vose ₹ 500 (US $ 7,40) uye ₹ 1,000 (US $ 15) Banknotes of Mahatma Gandhi Series sezvo pamutemo akatunhidzwa kuIndia kubva 9 Mbudzi 2016.
Kuzivisa kwakaitwa Prime Minister of India Narendra Modi nenzira mhenyu nhepfenyuro kero unscheduled pa 20:00 Indian Standard Time (IS) pamusoro 8 Mbudzi. In rokuzivisa, Modi akazivisa kuti Utilisation vose ₹ 500 uye ₹ 1,000 Banknotes of Mahatma Gandhi Series aizova haushandi apfuura pakati pousiku, uye vakaudza issuance idzva ₹ 500 uye ₹ Banknotes 2,000 pamusoro Mahatma Gandhi New Series nokuda yekare Banknotes. The Banknotes pamusoro ₹ 100, ₹ 50, ₹ 20, ₹ 10 uye ₹ 5 Mahatma Gandhi Series uye ₹ 2 uye ₹ 1 akagara pamutemo akatunhidzwa uye vakanga dzisisina pedyo kusvika.
demonetization ichi chakaita kuti pave akasiyana-chinja wallets. Development chikamu akakurumbira wallets vari:
Paytm chinhu Indian yemagetsi mabhizimisi uye yakavamba framework sangano makuru Noida, Uttar Pradesh. Zvakange propelled mu 2010. Zvinonzi akadzadzwa One97 Communications. The makasimba akatanga nokupa inotakurika richivandudzwa, kusanganisira mutariri yakavamba neindaneti mabhizimisi, pamwe zvinhu zvakafanana nemasangano, semuyenzaniso, Flipkart, Amazon.com, Snapdeal. mu 2015, izvozvo anowedzera zvaisanganisira Réservation senga pakufamba. Paytm anowedzera propelled firimu tikiti Réservation kuburikidza banding pamwe Cinépolis mugore 2016.
Chimwe chikuru nzira pakati paytm ndiyo hofisi mari shure. Mushure Munenge Exchange ose zvinoitika kuburikidza paytm, rimwe mwero mari kunobatanidzwa maererano urongwa. sangano rimwe nerimwe rine zvimwe chikamu tsigiro yemari kupiwa nokuda pakushambadzira uye mberi. Ichi chimedu kwavo kushanda mari ari Income kuziviswa. Unogona kudhonza ndaitambira mari nekunyatsotsanangura fmcg sangano chero kuwana zvimiro kana kuverenga mhinduro zvegore kundoitora.
Pasinei chokwadi kuti paytm imwe zvinokonzera mutambi ari mutsai nharaunda, izvozvo zvinobudirira akarasika huru Internet mabhizimisi chitoro pasi kuti vatambi vakaita flipkart, infibeam, snapdeal, Amazon. Uyewo hazvigoni nyore kuriritira pamwe Anomutsiridza kwenguva refu dhonza kukura. Saka kuparadzana pacharo uye nzvimbo pamisika yava kushandiswa akananga asi akabudirira zvikuru mupfungwa shoma nguva nokutongwa. CASHBACKS. Chimwe chinoita zvikonzero nepfambi bvumidza kana kwete vanhu vakatanga kutora gander panguva paytm achitsiva nzira kutenga paIndaneti zvigadzirwa iri nhandare kuti chaizvoizvo cashbacks uye rebates uye kwete nokuda kwayo Kutarisirwa kuparadzana kana kusingazununguki unhu shanduka. Kuri kuti yava kungopfeka pacharo kuti zvaiodza rebates pamusoro zvinhu zvingadai vakagara zvakawanda shopclues mumwe, jabbong kana zvimwe neniwo ecom vatambi. Iyi ndiyo nzvimbo nzira uye kushambadzira vanhu pana Paytm akafunga nedhaimani iyi pfungwa rinonzi cashbacks unobatanidza kuti pamwe chikwama kwavo. In mutauro dance, inozivikanwa se akanyatsokodzera SYNERGY.The mari vanofuratira vari kushandiswa kuburikidza chikwama ravo iro inturn ari kushandiswa kufambisira mberi chinhu rinonzi dzavo chikwama. Saka mumwe akapfura zvisikwa zviviri mapapiro. Saizvozvowo mupfungwa kwechirwere yokuenda mari mubayiro kupfuura kutora zvikuru rebheti nokuda nemhosva vose vakatamba consummately zvakanaka.
FreeCharge ari mumwe dandemutande inobva bhizimisi nzvimbo makuru Mumbai, Maharashtra. Rinopa paIndaneti hofisi ndiponesezve chero prepaid serura, postpaid-chinja, DTH uye Data Cards mu India. On 8 Kubvumbi 2015, Snapdeal vakawana Freecharge chii chiri aitaura sezvo wechipiri mukuru tisafunge rokudzora Indian paIndaneti mabhizimisi nharaunda sezvo vakadaro, pashure kutenga kubva Ibibo nomuvengi MakeMyTrip, uye mukuru Venture Capital mbudo kuIndia zvevakomana. Sezvinoratidzwa The Economic Times, urongwa huri akavimba pamusoro kuva chinhu kumativi US $ 400 kuti US $ miriyoni 450.
Unogona kubatsirwa chaizvo-siyana mutsai inopa akasiyana-chinja maitiro nyanzvi nemasangano utilizing Freecharge Coupons vose kuchengeteka kuitwa, Ivo tiudze kwamuri chaizvo-siyana zvakakwana yakavamba sarudzo zvakafanana postpaid inotakurika bhiri yakavamba, DTH mutariri yakavamba nemahofisi siyana.
Chinonyanya achangopfuura kopani aiva Freecharge New Year Special Promo Code uye freecharge Coupons uye mikana chikuru rebates uye cashbacks musi Mobile / DTH Recharge uye Bill zvemba. Zoutons ndiro chinozivikanwa Indian kopani Website riri kuudzawo freecharge Coupons.
MobiKwik ari kuita zvinhu zvizhinji chikwama uye paIndaneti yakavamba framework umo yeGmail.END_STRONG anogona kuchengeta mari ari paIndaneti “chikwama” kuti inotakurika uye DTH energize, kubhadhara basa mabhiri, uye tenga panguva yakanyorwa vapemhi. The MobiKwik chikwama inofanira ukapisa murwi pamwe mari kamwe isati zvinogona kushandiswa crosswise pamusoro functions.MobiKwik anopa vatengi kuti nzira zvinosanganisira mari utilizing zvavo nokuchengeta kana Mastercard, mambure vaitamba mari, uye 'mari mubhadharo', pasuo mari achiunganidza adhimini. MobiKwik chikwama chinhu Semi rakavharwa chikwama yakatenderwa Reserve Bank of India.
Parizvino Mobikwik chikwama hunowanikwa nyore kwavo Dispatch inotakurika chikumbiro, apo vatengi anogona sarudza kure mutsidzira, kuti atarisire Yakabudiswa utilizing Smartphones dzavo uye Wana Rs 10 cashback pamusoro Mobile Prepaid Recharge pamusoro Rs kanenge 100. Mukuwedzera, Mobikwik anopa Promo Codes, Coupons uye Coupon Codes kuti kukwira Rs.400 cashback musi DTH uye ichiita mabasa akawanda Anomutsiridza, akamurairawo Yakabudiswa uye kunotenga.
Kunze izvi zvitatu motokari padandemutande ichiita mabasa akawanda wallets pane vamwe vashoma rundown kuti mune rudzi pashure demonetization.
State Bank Buddy neHurumende Bank of India ndiyo huru Indian ichiita mabasa akawanda chikwama nyore mune 13 Indian tumitauro. Utilizing ichi kutumira mari, vachikumbira kuti inogadziridza yakajeka basa, nguva mutariri Yakabudiswa uye zvakawanda kubva takurika yako. Nyota Bank Buddy inotakurika chikwama kunokubatsira kuita zvakadai kuburikidza yako chikwereti kana Platinum makadhi kwairi. It achibvumira kuti vapinze pakuverengwa kupinda chikwama chako uye kuti Yakabudiswa kuti vokukurukura yenyu runhare Directory. Zviri nyore kuti Android uye iOS.
PayZapp kubva HDFC Nabk hunowanikwa vatengi kuti mabhanga uye imi achibvumira kuti Yakabudiswa pamwe chete woga Snap. Ita Yakabudiswa zvinobudirira nokuita kusanganisira chikwereti kana Platinum kadhi dzisinganyatsooneki zvinhu. kadhi rako pfungwa mubereko vari kudzivirirwa pamwe rokubhengi uye hapana chikonzero chinogombedzera kusimbisa pamusoro kuti. PayZapp ichiita mabasa akawanda chikwama anoita akationgorora matatu nerimwe Exchange. Zviri nyore kuti Android uye iOS.
India anoronga vanodzamara zvakajeka cashless panguva ino. The paIndaneti nzira Yakabudiswa chakaramba chichiwedzera, uye chikamu chikuru kwatiri vari kutsvaka kudzivirirwa uye yakachengeteka nzira yokuita nayo. Kuri kuti uri anowedzera kuonekwa fanana, zvino nyaya ino ndechokuti imi.
« Happy Pongal Images 2017, Anoda Quotes SMS Messages Whatsapp Status, Facebook DP
pamusoro 5 Best Africa mu North India »